Author Topic: Su'aal: Xanuun Iga haysta Gacmaha murqahooda iyo Bowd-yaha Lugaha (Read 13880 times)
« on: April 25, 2011, 10:18:32 AM »
A/sc.. dhamaan wallaalayaal waad salaamantihiin.
hadii aan u soogudbo su'aashayda waxay tahay..
Waxaan isku arkay jirkayga waliba gacmaha iyo bowd-yaha oo aad moodo inaysan tabar badan lahayn, walibana ay daalan yihiin xitaa waxaan murqaha gacanta markaan aan tuutuujiyo waxaan dareemayaa sidii inay wax dhiig oo kale ah fadhiyaan, dhakhtarna waa u tagay burseel waa leyga waayay..
marka Dr waxaan rabaa inaad iiga warantid arintaas illaahy cilmigaaga ha kuu siyaadiyee.
Re: Su'aal: Xanuun Iga haysta Gacmaha murqahooda iyo Bowd-yaha Lugaha
« Reply #1 on: April 26, 2011, 07:35:48 PM »
Imisa ayaad xanuunsantahay?
Qaabkee laguu qabtay markii ugu horreysay?
Maxaa xaaladdaada is bedel ku dhacay inta aad xanuunsanayd?
Maxaa calaamado kale aad leedahay oo la socdo tabardarridaan iyo murqo xanuunka?
Da'daada waa imisa, mana qabtaa cudur ka mid ah cudurra raaga sida dhiigkarka, sonkorta iwm.
Wax daawooyin ah oo in muddo qaadanaysid ma jiraan ama hdda aad qaadatidba?
Walaal si wax aan kaaga sheekno cudurka aad ka cabanayso waxaan u baahannahay warbixin buuxda iyo adigoo ka soo jawaaba su'lahaan kor ku xusan.
Rep//Xanuun Iga haysta Gacmaha murqahooda iyo Bowd-yaha Lugaha
« Reply #2 on: April 28, 2011, 10:25:06 AM »
Su'aalihii aad isoo waydiisay Dr jawaabohoodii waa ku waas
1- Imisa ayaad xanuunsantahay?
Wakhtiga xanuunkaygu waxaan ku qiyaasay ilaa 3 sano.
2-Qaabkee laguu qabtay markii ugu horaysay?
Waxaan isku arkay markii ugu horaysay lafo xannuun isugu jira lugaha, gacmaha iyo dhabarka.
3- Maxaa xaaladaada isbadal ku dhacay inta aad xannuunsanayd?
Markaan isku arkay xannuunkan waxaan guda dalay inaan sameeyo jimicsi isugu jira Dabaal, Kubad iyo inaan socod sameeyo maalintiiba mudo gaaraysa 1-saac(One Hour per day),.
4- Maxaa calaamado kale aad leedahay oo la socda tabardaridaan iyo murqo xannuunka?
Calaamadaha kale malihi laakiin waxaan isku arkaa markaan badda galo ama aan dhidido finan yar yar oo aan qofkae arki kari aniga mooyaan, laakiin wax dhibaato ah maygu hayaan, taasna waxaan is iri waa kulayga iyo dhididka meesha aan jooga ayaa hada kulu.
5- Da?adaadu waa imisa, manaqabtaa cudur kamid ah cuduradda raga sida Dhiigkarka iyo Sonkorta iwm?
Da?adaydu waa 27 sano, cuduradaas aad kor kuxustayna maqabo illaahay ayaanu ka magangalnayee, laakiin waxaa jira Bawasiir Banaanka iga gayaal(external ?ah), wakhti ku dhow 3 sano. Iyo isha midig oo aan xoogaa ??System Nerve??.
6- Wax daawooyin ah oo in muddo qaadanaysay majiraan, ama aad hada qaadatid?
Bishan gudaheeda ayaan dhakhtar u-tagay wuxuuna ii diray inaan dhiigag iyo kaadi iska qaado, kadibna jawaabtii waxy noqotay sidan:
A- RF (Negative)
Dawooyinkaana waa uu ii qoray:
A- ADENOSIN FORTE ( Injection)
B- DICLOFENAC VOLTERN 75mg (sodium injection)
C- CEPHEXCILENE (KIINI)
D- NEO HEALAR (SIBOOSTO).
Hada waxaan xoogaa dareemayaa fiicnaan, laakiin waxaad moodaa inaan u baahanahay Duugis jirka ah, waliba murqaha Gacmaha, Lugaha iyo Dhabarka..
Illaah ayaa caafimaadka bixya ayaan caafimaad waydiisanaynaa Dhamaan inta xannuunsan
« Reply #3 on: April 30, 2011, 10:12:02 PM »
Aamiin allaha ku caafiyo.
Waxay ila tahay in aad la xanuunsantahay cudurka lagu magacaabo Fibromyalgia.
Halkaan ka akhriso waxa cudurkaan uu yahay:
Haddii aad u baahantahay in lagaa hubiyo la xiriir takhtar ku taqasusay cudurrada lafa xanuunka. "Rheumatologist"
« Reply #4 on: May 04, 2011, 06:07:10 PM »
Marka hore waxaa mahad iska leh illaah, marka xigtana waxaan u-mahad celinayaa Dhakhaatiirta webcan iyo dhamaan macaamiisha sida fiican uga qayb qaadata inay waydiiyaan dhakhtarka somalidoc.com. su'aalaha kaga aadan xanuunka ay fahmi waayeen.
Teeda kale hadii aan usoo noqdo nafsadayda, aad baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad iigu soo jawaabteen, idinkoo wakhtigiina ii huray,.
Xanuunka aad ii sheegteen inaan qabo inay macquultahay, waxaan u malaynayaa sidaas aad sheegteen inaan xanuunkaas dareemaayo ah '' FIBROMYALGIA'', taasna waxaa daliil u ah qaabka aan u dareemaayo xanuunkaan gaar ahaan Jirkayga, Murqaha iyo meelo kale..
Hada sidaad sheegaty xanuunkaan wali lama hayo natiijadiisa iyo daawadiisaba illaaah ayaa daawo hayee,.
waxaad noosheegteen in cudurkan lagu garto oo kaliya cabashada bukaanka iyo wiisito-muuqaaleed''Physical Examination'
oo kaliya, hadaba hadaan sameeyo jimicsiga noocuu doona ha ahaadee jirkayga waxaan ka dareemayaa inaan soo fiicnaanaayo marba marka ka danbaysa.
Waxaad kaloo igula taliseen inaan Dhakhtar qaabilsan lafaha '' Rheumatologist'' aan la xiriiri laakiin nasiib daro meeshaan joogo ma joogo dhakhtarkaasi, ee idinku maxaad igu la talin lahaydeen oo kale, hadayse jirtaba wax dawo kaalmaati ah oo aad ogtihiin ii soo sheega fadlan, idinkoo la xiiriiraya dhakhaatiir kale..
« Reply #5 on: May 06, 2011, 06:40:22 PM »
Ma jiro wax baaritaan ah oo lagu garto cudurkaan "Fibromyalgia"
Talada aan ku siinnay oo ah in aad qaabisho takhtar "Rheumatologist" ah waxaa laga yaabaa maadaama uu khibrad dheeraad ah u leeyahay cudurradaan oo laga yaabo in uu kala garto isagoo adeegsanayo khibraddiisa si uu kuugu kala caddeeyo waxa aad qabto.
Takhaatiirta ku takhasustay cudurkaan waxay yiraahdaan dadka qaba "Fibromyalgia" waxay leeyihiin wax la yiraahdo "Tender Points" oo ah macnaheedu meel daqnato "Baro Daqnasho" haddii la taabto oo jirka ka mid ah, meelahaas oo gaarayo tiradooda 18 meel.
Haddii 11 meel oo ka mid ah 18-da meel uu qofku "fibromyalgia" qabo ka daqnado markii lagu sameeyo baaritaan loogu tala galay waxaa la dhihi karaa qofka wuxuu qabaa Fibromyalgia.
meelahaas waxaa ka mid ah: Surka/Qoorta, Feerta labaad ee feeraha (labada dhinacba), Kugta/Dhakada, Muruqa dhabarka kore, muruqa garabka, Xusulka (dhinaciisa banaanka xiga), Sinta (meesha bowdada ka soo fiiqan), Barida (meesha ay ka billaabato) iyo Jilbaha.
Sida loo ogaado ama sida loo daqniyaba la xiriir takhtarka aan kuu sheegay.
Inkastoo aan la ogeyn sida jimicsiga uu u daaweeyo cudurkaan "Fibromyalgia" laakiin waxaa la isku raacay in jimicsiga la sameeyo sida dabaasha, bushkileeyi wadowga iyo rucleynta ay tahay mid aad ugu fiicnaadaan dadka qaba cudurkaan, inkastoo lagula taliyo in maalin dhaaf ay u sameeyaan jimicsiga.
Daawooyinka la arkay in "Fibromyalgia" ay wax ka taraanne waa daawada loo adeegsado diiqada ama wewelka yareeyo.
« Reply #6 on: May 07, 2011, 09:17:44 AM »
Wll waad ku mahadsan tahay information-kan dheeriga ah ee aad sida fuhan iigu sii gudbisay,.
Taladiina waan qaadanayaa dhakhtarkaas ku takhasusay cilmiga Lafa Xannuunka '' Rheumatologist''
waan laxiriirayaa sida ugu dhakhsi yaha badan..
Views: 8100 August 10, 2015, 11:08:40 AM
Views: 5545 September 16, 2016, 09:11:55 PM
Views: 2408 April 13, 2017, 11:46:51 AM
Views: 16255 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 8002 December 23, 2010, 07:28:23 PM